Date My Pet » 5 Karazana Daters Voalohany. Izay iray Ianao?
5 Karazana Daters Voalohany. Izay iray Ianao?
Last nohavaozina: Jan. 12 2021 | 3 min namaky
Misy siansa ny mampiaraka. Ny fiarahana amin'ny fiainana dia azo oharina amin'ny simia fanandramana izay manantena ianao sy ny daty ary hameno ny hafa amin'ny fomba tsara hiteraka mahasarika.
Ny daty mahomby dia miankina amin'ny mifanentana ny daters. Ary satria fantany izay karazana dater ianao afaka manampy anao hitondra bebe kokoa ny toetra tsara tsy nanaiky lembenana izay tena dia.
Izany, Inona no karazana dater hoy ianao ianao?
Ny Over-be resaka
Raha ny teo-be resaka, ianao mihoatra noho ny mety ho extrovert. Indraindray ny fanomezam-pahasoavana ny gab manana ifandraisany bebe kokoa amin'ny selam-pitatitra sy ny tsy hanao amin'ny ilaina ny miresaka. Ianao indraindray eny nanapaka ny olona, ​​rehefa miresaka ao, tsy amin'ny antony mazava ho azy, ary tsy manana olana ny fitadiavana ny teny, rehefa misy olona manontany anao mba hilaza aminy ny momba ny tenanao. Dia tsy maintsy mianatra manao ny hihaino ihany koa ny miresaka. Te mba ho azo antoka fa ianao sy ny daty dia mifankahalala ny tsirairay. Raha manao izany dia hanampy anao hamantatra raha tsara ny roa dia mendrika na tsy mifanaraka.
Ms. & Mr. Izahay
Nahita olona iray izay koa dia afaka ny ho tia sy ny namana dia zava-dehibe ny voalohany io dater. Ianao fanazavana izany mazava tsara eo amin'ny daty voalohany. Alohan'ny efa nahazo ny mahafantatra ny daty, manaova drafitra haingana ianao dia iray segondra aza daty sy miara-getaways. Mety ho manomboka ny sazy maro be "isika, dia afaka ny", fa tsy ampy ny "aho." Mety hanome ny daty ny fahatsapana fa misisika be ianao, na mifehy na dia tsy ianao ary afaka manana azy ireo mikasa ny fivoahana teo anoloan'ny mpandroso sakafo afaka manolotra tsindrin-tsakafo. Tsy misy maha ratsy ny milaza ny fihetseham-ponao amin'ny voalohany mifindra ny daty ho amin'ny ambaratonga manaraka, ho azo antoka fotsiny no hahalalanao raha mety ny daty te mitovy amin'ny anao.
Mahaleo tena tanteraka ianao ka tsy mila na inona na inona na iza na iza na iza ianareo kery. Fahafahana no laharam-pahamehana ho anareo sy izay mahazo fandrahonana azy cutout ny fiainanao. Ataovy ao an-tsaina izany: rehefa mametraka ny herin'ny tsy mila na iza na iza na untamable loatra, dia mety ho anjara-ho any ny daty. Ny olona rehetra te-hahatsiaro ilaina eo amin'ny sasany fahaiza-. Raha mba sitrakao fotsiny mantsy daty sy tsy te-hanome ny daty ny fahatsapana fa ianao tsy ho ela dia tiantsika raha amin'ny fotoana rehetra, milaza fa. Ny voalohany tsara indrindra daty no fotoana hampiasana ny zava-drehetra avy eo ambony latabatra.
Raha izany ianao karazana dater, efa fantatrao ny karazana olona tianao nidina ho any amin'ny aesthetics. Ianareo mihitsy aza no nokarakaraina ny ainy teo amin'ny fandaharam-potoana mialoha Saika ny zava-nitranga lehibe fiainana toy ny fanambadiana sy ny ankizy. Alohan'ny mieritreritra ny hitondra ny fampakaram-bady ny tonga lafatra drafitra amin'ny daty voalohany, hizaha toetra ny rano miaraka amin'ny daty, ary hijery raha toa ka ny tanjona sy ny faniriana mitovy ny. Mety ho mampatahotra ny olona mba hihaino ny zavatra mifandray amin'ny fanoloran-tena rehefa te olona fotsiny handeha ho any amin'ny sarimihetsika amin'ny.
Tahaka ny namanao ny idealist ambony, fantatrao izay tianao ianao, fa kely kokoa ny mifantoka amin'ny daty ny mahatonga ny vola. Manana hevitra hentitra ny fomba tokony niisa ka rehefa ny fahefany sy ny lafiny ara-bola. Iza izy ireo, na miasa ho niasa ho an'ny no mamolavola ny fomba fijery ny hoe iza izy ireo. Ny fahafantarana ny karazana olona tianao raha ny amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana dia ny lehibe. Aoka ny miezaka ny ho misokatra bebe kokoa amin'ny daty amin'ny olona izay tsy mahafeno ny fepetra. Mety ho gaga ianao raha lavo ho an'ny olona iray izay tsy antonona ny lafatra, tonga izany.
Misy zavatra toy izany Araka ny ady tsara amin'ny Fifandraisana?